1 Samuel 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
12 Afei Samuel ka kyerɛɛ Israel nyinaa sɛ: “Nea moka kyerɛɛ me nyinaa, sɛ memma ɔhene nni mo so+ no, matie mo.+ 2 Monhwɛ, ɔhene a obedi mo anim no ni!+ Me de, mabɔ akora+ na mafuw dwen,+ na me mma nso, mo mu na wɔwɔ;+ me de, mifi me mmofraase anantew mo anim de abedu nnɛ.+ 3 Me na migyina ha yi. Monka wɔ Yehowa ne nea wasra no+ yi anim: Hena nantwi anaa n’afurum na magye,+ na hena na masisi no anaa mahyɛ no so? Hena nsam na magye adanmude de akata m’ani?+ Monka na menhyɛ mo ananmu.”+ 4 Ɛnna wɔkae sɛ: “Wunsisii yɛn, wonhyɛɛ yɛn so, na wunnyee yɛn mu biara nsam hwee.”+ 5 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnnɛ Yehowa yɛ ɔdansefo mo anim, na nea wasra no+ yi nso yɛ ɔdansefo sɛ moanhu hwee me nsam.”+ Ɛnna wɔkae sɛ: “Ɔyɛ ɔdansefo.” 6 Na Samuel nso ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Yehowa yɛ ɔdansefo; ɔno na ɔfaa Mose ne Aaron na oyii mo agyanom fii Egypt asase so.+ 7 Enti afei munnyinagyina na mimmu mo atɛn Yehowa anim, na menka adetrenee+ a Yehowa ayɛ ama mo ne mo agyanom nyinaa nkyerɛ mo. 8 “Bere a Yakob baa Egypt,+ na mo agyanom fii ase su frɛɛ Yehowa+ ara pɛ na Yehowa somaa Mose+ ne Aaron ma wodii mo agyanom anim fii Egypt ma wɔbɛtenaa ha.+ 9 Nanso wɔn werɛ fii Yehowa, wɔn Nyankopɔn,+ enti ɔtɔn+ wɔn hyɛɛ Hasor sahene Sisera nsa,+ ne Filistifo nsa,+ ne Moab hene nsa,+ na wɔn nyinaa ko tiaa wɔn. 10 Na wosu frɛɛ Yehowa+ sɛ, ‘Yɛayɛ bɔne,+ na yɛagyaw Yehowa akɔsom Baal anyame+ ne Astoret+ ahoni. Afei gye yɛn+ fi yɛn atamfo nsam na yɛnsom wo.’ 11 Ɛnna Yehowa somaa Yerubaal+ ne Bedan ne Yefta+ ne Samuel,+ na ogyee mo fii mo atamfo a wɔatwa mo ho ahyia nsam ma motenaa ase dwoodwoo.+ 12 Bere a muhui sɛ Ammonfo hene Nahas+ aba mo so no, moka kyerɛɛ me sɛ, ‘Dabi, ɔhene ara na obedi yɛn so!’+ nso saa bere no nyinaa na Yehowa, mo Nyankopɔn na ɔyɛ mo Hene.+ 13 Na afei ɔhene a moapaw no, nea mubisae no, oni;+ seesei Yehowa asi mo so hene.+ 14 Sɛ musuro Yehowa+ na mosom no+ na mutie ne nne,+ na moantew Yehowa ahyɛde so atua+ a, Yehowa, mo Nyankopɔn bɛka mo ne ɔhene a obedi mo so no nyinaa ho. 15 Na sɛ moantie Yehowa nne+ na motew Yehowa ahyɛde so atua+ a, Yehowa nsa bɛba mo ne mo agyanom so.+ 16 Afei munnyinagyina na monhwɛ ade kɛse a Yehowa rebɛyɛ mo ani so yi. 17 Ɛnnɛ nyɛ awitwa bere+ anaa? Nanso mesu afrɛ+ Yehowa na wama aprannaa abobom na osu atɔ,+ na mohwɛ a, moahu sɛ bɔne a moayɛ no dɔɔso+ wɔ Yehowa ani so, sɛ́ mubisaa ɔhene.” 18 Ɛnna Samuel su frɛɛ Yehowa,+ na Yehowa maa aprannaa boboom na osu tɔe saa da no,+ enti ɔman no nyinaa suroo Yehowa ne Samuel kɛse. 19 Na ɔman no nyinaa ka kyerɛɛ Samuel sɛ: “Bɔ Yehowa, wo Nyankopɔn mpae+ ma wo nkoa, na yɛmpɛ sɛ yewuwu, efisɛ yɛn bɔne nyinaa akyi no, yɛadi amumɔyɛsɛm abisa ɔhene.” 20 Ɛnna Samuel ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Munnsuro.+ Mo de, moanya ayɛ bɔne yi nyinaa. Nanso monnnan mmfi Yehowa akyi,+ na mmom momfa mo koma nyinaa nsom Yehowa.+ 21 Monnnan nnkodi ahuhude+ a mfaso biara nni so+ na entumi nnye nkwa akyi, efisɛ ɛyɛ ahuhude. 22 Na Yehowa din kɛse no nti,+ ɔrennyaw+ ne man, efisɛ Yehowa asi ne bo sɛ ɔde mo bɛyɛ ne man.+ 23 Na me nso, ɛmpare me sɛ mɛyɛ Yehowa bɔne na magyae sɛ mɛbɔ mpae ama mo.+ Mɛkyerɛ+ mo nea eye+ ne ɔkwampa. 24 Yehowa na munsuro+ no, na momfa mo koma nyinaa nsom+ no nokware mu; monkae nneɛma akɛse a wayɛ ama mo no.+ 25 Nanso sɛ musen mo kɔn yɛ bɔne a, wɔbɛpra mo akɔ,+ mo ne mo hene nyinaa.”+